भृकुटीमण्डपमा सफ्टटेक - प्रदर्शनी - साप्ताहिक
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) ले बर्सेनि आयोजना गर्दै आएको क्यान सफ्टटेक-२०१४ भदौ २६ देखि राजधानीको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा प्रारम्भ भएको छ। आगामी भदौ २९ गतेसम्म चल्ने यो प्रदर्शनीको विशेषता सफ्टवेयर, सर्भिसेज, सोलुसन र कम्युनिकेसनको क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ-नयाँ प्रविधि नै हुन्। त्यसबाहेक यो क्षेत्रको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणका निम्ति सार्थक अन्तक्रिर्या गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई नेपाली समाजमा प्रवर्द्घन गर्ने प्रदर्शनीको उद्देश्य छ। यो क्यान सफ्टटेकको सातौं संस्करण हो। यसको शीर्ष प्रायोजक सुविसु केबल नेट तथा सह-प्रायोजक नियो ईआरपी हुन्। यो संस्करणमा डायमण्ड स्पोन्सर नेपाल टेलिकम, सिल्भर स्पोन्सरहरू ईरासफ्ट सोलुसन प्रालि, जिल इन्टरप्राइजेज र इजोन इन्टरनेसनल एवं प्रिन्ट स्पोन्सर सागर इन्फोसिस छन्। त्यसबाहेक विभिन्न अफिसियल प्रायोजक पनि छन्। सफ्टटेकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता राष्ट्रिय तथा एसोसियो र विट्साजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग पुर्‍याएका छन्।
सफ्टटेक भएकाले यसमा विशुद्ध रूपमा सफ्टवेयरका बारेमा जानकारी प्रदान गरिँदैछ। सुविसु क्यान सफ्टटेक-२०१४ इन एसोसियसन विथ नियो ईआरपीमा जम्मा १ सय ४२ वटा स्टल छन् जसमा सफ्टवेयरको क्षेत्रमा शिक्षा, कम्प्युटर सुरक्षा, बैंकिङ, सूचना व्यवस्थापन, लेखा व्यवस्थापन, एन्टिभाइरस तथा अस्पताल व्यवस्थापन आदि सफ्टवेयरका स्टल छन् भने सेवासम्बन्धी क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा, केबल तथा डिस टेलिभिजनसम्बन्धी सेवा आदिका स्टल राखिएका छन्। त्यस्तै सोलुसनको क्षेत्रमा सेक्युरिटी सोलुसन, वायरलेस सोलुसन, प्रिन्टिङ्स सोलुसन, पावर सोलुसनका साथै विभिन्न एप्लिकेसनसहितका ट्यावलेटहरूसँग सम्बन्धित स्टलहरू छन्। कम्प्युटर र सुचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यस पटकदेखि स्मार्ट मोबाइल र ल्यापटपसहितका स्टल पनि थप गरिएका छन्।
क्यान सफ्टटेक-२०१४ को शीर्ष प्रायोजक सुबिसु केवल नेट आफ्ना ग्राहकका लागि विशेष अफरका योजनासहित सफ्टटेक-२०१४ मा प्रस्तुुत भएको छ। डायमण्ड स्पोन्सर नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि विशेष स्किमसहितको रिम कार्डलगायतका अफरहरू अघि सारेको छ। सिल्भर स्पोन्सर ईरासफ्ट सोलुसन्सले अन्वर स्मार्ट ट्याक्सी नामक मोबाइलको सहायताले चलाउन सकिने एप्लिकेसन निर्माण गरेको छ। त्यसैगरी सिल्भर स्पोन्सर जिल इन्टरप्राइजेजले फेसबुकमार्फत रजिस्ट्रेसन अभियान चलाउनेलाई नि:शुल्क डेस्कटप तथा ल्यापटप सर्भिसिङको कुपन प्रदान गर्छ। यो अफर दसैंसम्म रहनेछ। सिल्भर स्पोन्सरकै रूपमा रहेको इजोन इन्टरनेसनलले प्रथम नेपाली क्लाउडलाई ५० हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध गराइरहेको छ। अफिसियल इ-लर्निङ पार्टनर मिदास एजुुकेसनले प्रदर्शनको अवसर पारेर एन्ड्रोइड ट्याबलेट, मोबाइल तथा ल्यापटप खरिद गर्ने तथा उक्त प्रदर्शनीमा लिएर आउने व्यक्तिहरूलाई नि:शुल्क रूपमा ४ सय रुपैयाँबराबरको ई-लर्निङ एप्लिकेसन प्रदान गर्छ। प्रिन्ट स्पोन्सरसागर इन्फोसिसले क्यास्परस्की एन्टीभाइरसका साथै प्रेस्टिजियो स्मार्टफोन तथा ट्याब्लेटमा विशेष अफर दिएको छ।
सफ्टटेक अवलोकन गर्न आउने सर्वसाधारणलाई प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ तथा विद्यार्थीहरूलाई २५ रुपैयाँ तोकिएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनीको अनलाइन टिकट खरिदको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। यो सेवा क्यान डट ओआरजी डट एनपीमा लग अन गरी खरिद गर्न सकिन्छ। प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने उद्देश्यअनुरूप अनलाइन टिकट खरिदमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्थासमेत मिलाइएको सफ्टटेकका संयोजक विश्वराम बलामीले बताए। कलेज तथा स्कुलका विद्यार्थीहरू सम्बन्धित कलेज तथा स्कुलको पत्रसहित आए टिकट दरमा विशेष छुटसमेत प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि स्कुलको पत्रसहित आए नि:शुल्क प्रवेश गराउने व्यवस्था मिलाईएको क्यानका अध्यक्ष बिनोद ढकालले बताए।
आफ्नो मोबाइलको म्यासेज बक्समार्फत पनि सफ्टटेकमा प्रदर्शन गरिने सामान तथा सेवाहरूका विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि क्यान स्पेश अनि आफूले जानकारी लिन चाहेको सामान वा ब्रान्डको नाम वा सर्भिसको नाम टाइप गरी ५००१ मा म्यासेज पठाउन सकिन्छ। त्यसैगरी प्रदर्शनी अवधिभर हरेक दिन घण्टैपिच्छे तथा दैनिक लक्की ड्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ। सुविसु क्यान सफ्टटेक-२०१४ इन एसोसियसन विथ नियो ईआरपीको टिकट खरिद गरेका अवलोकन कर्ताहरूले प्रदर्शनी स्थलमा रहेको सिद्धार्थ बैंकको स्टलमा गै हेलो पैसा वालेट एकाउन्ट खोले बैंकका तर्फबाट उक्त एकाउन्टमा १ सय रुपैयाँ जम्मा गरिदिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सफ्टवेयरको क्षेत्रमा भैरहेका विभिन्न प्रविधिको जानकारी लिन मात्र होइन, प्रयोग गर्नसमेतसफ्टटेकको यो संस्करणले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा क्यानको छ।
सफ्टवेयरका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ
अध्यक्ष, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान)
सफ्टटेकमा त्यस्तो के आकर्षण छ ?
क्यानले आयोजना गर्न लागेको क्यान सफ्टटेक सफ्टवेयर, सोलुसन्स, सर्भिसेज र कम्युनिकेसन्सलाई केन्दि्रत गर्ने प्रयास गरेका छौं। यसमा विभिन्न प्रायोजक कम्पनीहरूले विशेष प्रकारका सफ्टवेयर र अन्य क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछन्। कतिपय कम्पनीले प्रदर्शनी स्थलमै नयाँ विषयवस्तुका बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने भनेकाले पनि यो क्षेत्रका धेरै नयाँ कुरा देख्न र अनुभव गर्न पाइनेछ।
कुन उद्देश्यले सफ्टटेकको आयोजना गरिएको हो ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेन। नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको उदाहरण मात्र हाम्रा लागि पर्याप्त छ। उनीहरू यो क्षेत्रमा धेरै अघि बढिसके। नेपालमा हामी हार्डवेयरका क्षेत्रमा धेरै गर्न नसके पनि सफ्टवेयरका क्षेत्रमा प्रशस्तै कार्य गर्न सक्छौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि यो क्षेत्रमा गर्न सकिने धेरै सम्भावना भएको औंल्याए, तर नेपालमा अहिले यो क्षेत्रमा गर्न सक्ने सम्भावना भएका धेरैजसो युवा विदेश पलायन भएका छन्। यी सबैका लागि सरकारले उपयुक्त नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा प्रशस्त विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने सम्भावना छ। नेपालको हावापानी पनि यसका लागि एकदमै अनुकूल छ। धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अहिले फिलिपिन्सतर्फ आकषिर्त भैरहेका छन्। हामीले पनि त्यस्ता कम्पनीलाई नेपालमा आकषिर्त गर्न सक्थ्यौं, तर त्यसो हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा सफ्टवेयरको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेका केही राम्रा कामको उदाहरण सफ्टटेकमा देख्न पाइनेछ।
निजी क्षेत्रले के गरिरहेको छ ?
हामीले हार्डवेयरभन्दा पनि सफ्टवेयरका क्षेत्रमा केही गर्न सक्छौं भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ। नेपालमा पनि प्रशस्तै सफ्टवेयर विकास भएका छन्। धेरै नेपालीहरू विदेशी कम्पनीहरूमा सफ्टवेयरमै काम गरिरहेका छन्। नेपाली युवाहरूले पनि प्रशस्तै उपयोगी सफ्टवेयर निर्माण गरेका छन्, तर यतिले मात्र पुग्दैन। यो व्यवसायलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसका लागि के गर्नुपर्ला ?
हामीले यसका लागि क्यानलाई महासंघमा लाने निर्णय गरेका छौं। सन् १९९२ मा स्थापना भए यता क्यानले धेरै कार्य गरिसकेको छ। ५७ जिल्लामा हाम्रो शाखा छन्। सरकारले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत हामीलाई महासंघका रूपमा दर्ता गर्न चाहिरहेको छ, तर हामी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता हुन चाहन्छौ। यसो भए सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा हामी एउटा मात्र मूल संस्था हुन्छौं भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भए यो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि केही पहल गर्न सकिन्छ, तर सरकारले हामीलाई विभिन्न बहाना बनाएर त्यसो गर्न दिइरहेको छैन। आशा गरौं, हामी छिटै महासंघका रूपमा विधिवत् दर्ता हुनेछौं।